सुर्खेतमा एमालेको शक्ति प्रदर्शन – Sajha Bisaunee
सुर्खेतमा एमालेको शक्ति प्रदर्शन
संविधान संशोधन गरेर छैठौं प्रदेशलाई तराईसँग जोड्ने उद्घोष
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सुर्खेतमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । स्थानीय चुनावको मिति नजिकिंदै गर्दा एमालेले शनिवार वीरेन्द्रनगरमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । प्रदेश नम्बर ६ स्तरीय जनसभा आयोजना गरेर एमालेले स्थानीय तहको चुनावमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएको हो ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा जनसहभागिता भएपछि उत्साहित एमालेले अब यो प्रदेशलाई तराईसँग जोड्ने उद्घोष गरेको छ । उत्तरी नाकासँग जोडिए पनि यो प्रदेश दक्षिणी नाकासँग नजोडिएको भन्दै एमालेले अब संविधान संशोधन गरेरै भए पनि दक्षिणसँग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । त्यसका लागि आफ्नो पार्टीलाई आगामी चुनावमा बहुमत दिन नेताहरूले आग्रह गरेका छन् । बहुमत प्राप्त भए संविधान संशोधन गर्ने र प्रदेश नम्बर ६ लाई तराईसँग जोड्ने एमालेले प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
छैठौं प्रदेशले तराईलाई नछोएको र मेची–महाकाली अभियानले पनि समेट्न नसकेपछि सुर्खेतमा सभा आयोजना गरिएको एमालेले जनाएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘पहिला हामीलाई बहुमत दिनुस्, सबै तहको चुनाव भएपछि हामी संविधान संशोधन गर्नेछौं । त्यसपछि यो प्रदेशलाई पनि तराईसँग जोड्नेछौं, प्रदेश ६ को पहुँच दक्षिणी नाकासम्म पुग्नेछ ।’ उनले उत्तरी नाका खुलेको र अब यो प्रदेशको समृद्धिका लागि दक्षिणी नाकासम्म पहुँच हुनु अनिवार्य भएको बताए । यसका लागि अब एमालेले पहल थाल्ने उनको भनाइ थियो ।
‘चुनावबाट भागेर कहाँ जानुहुन्छ ?’
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त नै स्थानीय चुनाव भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा वैशाखमा चुनाव सम्पन्न हुनुपर्ने जनाएको छ । एमालेले चुनाव सम्पन्न गर्न नसक्ने भए तत्काल राजीनामा दिनसमेत सरकारलाई चुनौती दिएको हो । सरकार चुनाव नगराउने खेलमा लागेको भन्दै नेताहरूले वैशाखमा चुनाव नभए वर्तमान सरकार असफल हुने र त्यसपछि एमालेले नै चुनाव सम्पन्न गर्ने नेताहरूको दाबी छ ।
सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावका लागि खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘चुनावबाट भागेर कहाँ जानुहुन्छ ? जता गए पनि चुनाव आउँछ । अब एमालेको जीतलाई कसैले रोक्न सक्दैन, बरु सरकारले खुट्टा दह्रो बनाएमा हामी चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नेछौं ।’ संविधान संशोधनको बहानामा चुनाव बिथोल्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै ओलीले तोकिएको मितिमा चुनाव नभए आफ्नो पार्टीले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए । उनले थपे, ‘चुनाव गर्न सक्नुहुन्न भने सरकार छोड्नुस्, एमाले चुनाव गराउन तयार छ । कहिलेसम्म देशलाई बन्धक बनाउने ?’
कांग्रेसप्रति आक्रामक बनेका ओलीले लोकतन्त्रका नाममा कांग्रेसले विदेशीको स्वार्थलाई मात्र ख्याल गरेको आरोप लगाए । पटक–पटक बहुमत प्राप्त गर्दा समेत कांग्रेसले त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको र अहिले केही मधेसी नेता र विदेशीको मात्र कुरा सुनेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । अब एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बेला आएको बताउँदै उनले भने, ‘यो बजेट त साथीहरूले ल्याउलान्, तर अर्को वर्षको बजेट एमालेले नै ल्याउनेछ । जनताले एमालेलाई त्यसको जिम्मा दिनेछन्, हाम्रो पक्षमा जनलहर देखेर चुनाव बिथोल्ने खेल भइरहेको छ ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रदेश ६ को समृद्धिका लागि सुर्खेतदेखि रारासम्म दुईलेन सडक निर्माणलाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकता दिने बताए । यस्तै अब कोही पनि रोजगारीका लागि विदेश जानुनपर्ने भन्दै उनले यसका लागि एमालेलाई बहुमत दिन
‘जनसागर देखेर अलमलमा पर्‍यौं’
सुर्खेतमा आयोजित जनसभामा जनताको सहभागिता धेरै देखेपछि आफूहरू अलमलमा परेको एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए । पार्टीले देशभर आमसभा सम्पन्न गरेको बताउँदै उनले भने, ‘अरु ठाउँमा पनि सहभागिता उत्साहजनक थियो, तर सुर्खेतमा यो जनसागर देखेर हामी अलमलमा पो प¥यौं । अहिलेसम्मकै ठूलो जनसभा सुर्खेतमा भयो, यहाँको जनसहभागिताले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ ।’ उनले सुर्खेतमा भएको जनसहभागिताले पार्टीलाई थप उत्साहित बनाएको दाबी गरे । नेता नेपालले माओवादी चुनावबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारसँग चुनाव गराउने आँट छैन, चुनाव गर्न नसक्ने भए सरकार छोड । हामी चुनाव गराउन तयार छौं, एमालेको पक्षमा जनलहर देखेर किन चुनावसँग डराउने ?’ नेता नेपाल मात्र होइन, शनिवारको जनसहभागिताको आँकलन आयोजकले पनि गरेका थिएनन् । सहभागिता धेरै देखाउन दलहरूले साँघुरो स्थानमा सभा आयोजना गर्ने गर्दछन् । तर एमालेले शनिवार खुलामञ्चमा जनसभा गर्ने आँट ग¥यो । जनसहभागिता उल्लेख्य भएपछि आयोजकहरू पनि उत्साहित देखिन्थे । एमालेले ५० हजार जनता सहभागी भएको दाबी गरेको छ । सहभागी ओसार्न सुर्खेतमा मात्र एक सय भन्दा बढी गाडी परिचालन गरिएको थियो । शनिवारको जनसहभागितालाई एमालेले स्थानीय चुनावको सुरुवात र आफ्नो शक्तिको रूपमा लिएको छ ।
जनसभामा एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्यालाले प्रदेश नं. ६ मा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको दाबी गरे । उनले अब हुने निर्वाचनबाट एमाले यस प्रदेशको नम्बर १ पार्टी हुने विश्वास व्यक्त गरे । आमसभा अघि स्थानीय बुलबुलेचौकबाट झाँकीसहित र्‍याली निकाली बजार परिक्रमा गरिएको थियो । जसमा हजारौं एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मितिः ६ चैत्र २०७३, आईतवार १४:०४